Ogaden News Agency (ONA) – Siyaasadda Itobiya ee Al-Shabaabka Somaliya iyo Hawaarinta (Liyu-Booliska) Ogadenya
Siyaasadda Itobiya ee Al-Shabaabka Somaliya iyo Hawaarinta (Liyu-Booliska) Ogadenya
Posted by ONA Admin	/ April 21, 2014
Itobiya markii lagu jabiyay Somaliya oy ka baxday ugama aanay bixin in aanay kusoo noqonin ee waxay uga baxday inay dib u fiiriso khaladaadka ay gashay oy dib isu saxdo ka dibna ugu soo noqoto si ka duwan sidii hore. Sidoo kale markii lagu jabiyay dagaalada ka socda Ogadenya oo ciidamadeedii ay diideen inay weerar qaadaan waxay bilowday inay talo u doonato dalka Sudan siday ula falgali lahayd xaaladda CWXO iyo guud ahaan halganka ka socda Ogadenya.
Qorshaha Itobiya ay u dajisay labada dhan ee xadka (Somalida Jamhuuriyadda iyo Somalida Ogadenya) wuxuu ku qototmaa isku hadaf, hal ujeedo ayuuna leeyahay. Hasa ahaatee laba Taaktiik oo kala duwan ayay adeegsatay. Qorshaha Itobiya ay dajisatay ama loo dajiyay (sida lagu hayo xoga dhab ah) wuxuu ahaa in ciidankeeda loo arko mid ka duwan midkii hore ee Somalida ay necbayd oo laga dhigo ciidan la jecel yahay oo laga dugsanayo dhalinyaro Somali ah oo dadka deegaanka la dhashay hasa ahaatee laga dhigay cadaw manaxaan ah. Qorshahaa ama Istraartiijiyada Itobiya wuxuu ahaa midkaa, muddo shan sano ah ayaadna moodaa inay ku gaadhay hadafkii laga lahaa, oo Somaliyana waa tan loogu yeedhay inay kusoo noqoto, Ogadenya looga bixiyay ciidankeeda Awliyadii.
Waxaa jiray filim kuwa lagu qoslo ah (Comedy) oo la yidhaahdo – The Dictator – oo nin aan caan ku ahaan jiray filimada oo lagu magacaabo Sacha Baron uu jilyay. Filimka waxaa ku jirtay meel uu tartan orod ah samaynayo oo qofkii ka hormaraaba uu xabad ku dhufanayo ugu dambayntana uu amrayo markuu daalo in loo soo dhaweeyo xariga dhamaadka (Finish line) oo sidaa uu ku noqonayo qofkii 1aad oo loogu sacabaynayo. Itobiya waxay la mid tahay jilaagaa markay Somalida la dhaqmayso, oo qofkii ay u aragto inuu lugteeda ka hormarayo xabad ayay ku dhufanaysaa, waxaana daba socda oo la ordaya qaar ay iyadu soo dooratay oo ugu sacaba tumaya inay ka horeyso.
Waxaa dhab ah oon cidna ka qarsoonayn inay Itobiya hubayn jirtay ilaa hadana hubayso Al-shabaabka Somaliya, oo waliba ay ka wada socdaan xagga dhaq-dhaqaaqa iyo hawlgalka labadooda ciidan si aanay isugu dhicin, ilaa marka la doonayo in indhaha lagu jeediyo mooyaane. Dhanka kale Hawaarinta ama Liyu-Booliska waa ciidan u qoran Itobiya oo si sharci ah ay u hubayso, tababarto, mushaharna ka qaata. Labada ciidanba (Al-Shabaab iyo Liyu-Boolis) waa dhalinyaro da’yar oo Somali ah oo loogu talagalay inay laayaan oo si naxariisdara ah ula dhaqmaan walaalahooda Somaliyeed. Somaliya kuwa jooga waxay leeyihiin astaan diineed waxayna wataan calan madow oo Ashahaadada ku qoran tahay waxaana lagu shaabadeeyay Al-Qaacida, kuwa Itobiya joogana waxay kasoo horjeedaan dhaqan kasta oo diinta islaamka ku lug leh, waxayse wataan calanka Itobiya. Waxay labadaba ka midaysan yihiin dilka macna darada ah ee shacabka loo gaysanayo iyo nacaybka laga buuxiyay oy u hayaan qofka Somaliga ah ee la dhashay ee diida dhaqankooda. Waxay ka midaysan yihiin inay si naxariisdara ah u dilaan qofkay doonayaan inay dilaan si shacabka intiisa kale uga cabsado.
Labadaba waxay fuliyeen qorshihii Itobiya ay ka lahayd qofka Somaliga ah oo ah in nacaybka loo hayo ciidankeeda uu meesha ka baxo, oo loo arko inay badbaadinayaan oy uga sokeeyaan Al-Shabaab iyo Liyu-Bolis. Ujeedadii Itobiya ay ka lahayd ee ahayd inay meesha ka baxdo colaada ay Somalida u hayeen ciidankeeda waxaad moodaa inay dhamaatay ilaa xad, waxayna goor aan fogayn ku xigi doonta inay uga gudubto marxaladda 2aad oo ah inay si sharci ah ula wareegto Somaliya.
Nin caaqil ahaa ayaa laga sheegay inuu yidhi; Ilaahow ama aniga caqliga iga qaad ama tolkay waxan muuqda garansii. Haatan Somali waxay mareysaa marxalad aad kahatar u ah oo intii garanaysay khatarteedana ama ay dalka ka tageen ama ay dishayba sida filimkii Sacha Baron.
Waxaa jira maqaal xaaladda Somaliya oo dhab ah taabanaya oo uu ku qoray shabakadda Dayniile (http://dayniilecom.com/March2014/10March18.htm ) qoraa isku magacaabay Xassan X. Cabdi (Indhoos). Maqaalkaa wuxuu ku weydiiyay Somalida farqiga u dhexeeya ” Waxay ku kala duwan yihiin ciidamadii Itoobiya ee uu soo galiyey dalka madaxweynihii hore Col. C/llaahi Yuusuf Axmed oo geeriyooday, oo dagaal lagala hortagay iyo kuwa uu hadda soo galiyaya M/weyne Xassan Sheekh Maxamud. Waa maqaal aad u xiisa badan oo muujinaya heerka hooseeya ee garaadka Somalida. Waa su’aal laga sugayo inay ka jawaabaan wax-garadka Somaliyeed.
mohamed abdi xamiid says:
miyaad garan itoobiya waa cadaw xun laakiin jwxo ayaa ifkii ku kadeeday ee garta.